Kuba wonk 'ubani uthanda nohlaza, knockout ubuhle, iinqaba, kunye kwelanga wageza izidiliya, le elula intle ecaleni iRhine River kulapho kufuneka uye. Uhambo phakathi imizi German Cologne ne Mainz mnye lafika ilixa, nizikhumbule ngonaphakade kanaphakade. ubume bayo umfanekiso-ogqibeleleyo akushiye kanzima! romantics True abakholelwa neziphelo happy magic fairytale ziya ndimnqule iinqaba ebukekayo peeking nge izidiliya eziluhlaza. I-West iRhine kaloliwe yaziwa lonke njengenxalenye uhambo "Romantic iRhine", ke ukuba eso usiphetheyo sifana umntu omthandayo lokuza, ukwenza njalo. Uza kuba ixesha ayilibale, ngokufanayo nabanye abaninzi abenze iWest Rhine kaloliwe ukuba ibe yinxalenye yohambo lwabo lwaseYurophu.
ILyon entle sisixeko sesithathu ngobukhulu e Fransi yaye iziko enamandla yokwenene lizwe. Yinto nakanjani a ezikulungele ngakumbi ekuyiwa ekhululekile ngaphezu capital, ezifundisa ukuzonwabisa kuwo wonke amagumbi. Lyon likwazi konke: olondolozo lwembali, zokudlela, boutiques, kunye nakwiivenkile yokuqala, ngokunjalo inani elikhulu imivalo neentonga. Kuyinto kwakhona eyunivesithi zisebenza emzini, kakuhle exabisa utyelelo zikhenkethe yakho Uloliwe European. Beautiful izakhiwo ebheke Rhone River, elikhulu zokulondoloza, kunye nemo engqongileyo ukuqhayisa iimpembelelo ezahlukeneyo French yenkcubeko - into ukuba ukuthanda?
Akukho ukhenketho Uloliwe aseYurophu ngokupheleleyo ngaphandle ekhwele ngokusebenzisa nenkangeleko entle Tuscany. Lo mmandla ku unikeza central Italy izinto oluhle kwaye inika amanqaku eliqela umdla kwenu ngokupheleleyo kufuneka utyelele. Ukususela kakhulu lenkundla Renaissance art kaMichelangelo kunye Botticelli ukuba imisebenzi emihle kakhulu Mother Nature kule Apennines, Tuscany awuve. Uhambo uloliwe zokucwangciswa kakuhle kuthatha kunxweme Sea Tyrrhenian, okanye ukuvumela ubona ezidiliyeni esidumileyo Chianti.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-european-train-tours%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#travelfrance #indawo yokuhamba train Travel travelgermany travelitaly